Usoro mbara igwe: mbara ala, Satellites, mmalite na ihe mejupụtara | Network Meteorology
Portillo nke German | | Astron
Usoro mbara igwe Ọ dị ukwuu ma anyị enweghị ike ịgafe ya na ndụ anyị nwere. Ọ bụghị naanị na e nwere usoro mbara igwe na mbara igwe, mana enwere ọtụtụ nde ụyọkọ kpakpando dị ka nke anyị. Usoro mbara igwe bụ nke ụyọkọ kpakpando a maara dị ka Milky Way. Ọ bụ Sun na mbara ala itoolu nwere Satellites ha. Afọ ole na ole gara aga, e kpebiri na Pluto esoghị na mbara ala maka na ọ dabataghị nkọwa mbara ala.
You chọrọ ịmata usoro mbara igwe nke ọma? Na nke a, anyị ga-ekwu maka njirimara ya, ihe mejupụtara ya na ihe bụ ike ya. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmụ maka ya, gaa n'ihu na-agụ 🙂
1 Ngwakọta nke usoro mbara igwe
2 Mbara ala nke usoro mbara igwe
3 Nkịtị Satellites na dwarf mbara ala
4 Mpaghara ndị isi
5 Ifufe anyanwụ
Ngwakọta nke usoro mbara igwe
Como A naghị ewere Pluto dị ka ụwa, usoro mbara igwe bụ Anyanwụ, mbara ala asatọ, planetoid yana Satellites ya. Ọ bụghị naanị na ahụ ndị a, mana enwerekwa asteroids, comets, meteorites, uzuzu, na gas na-emechi anya.
Ruo 1980 e chere na usoro mbara igwe anyị bụ naanị nke dị adị. Otú ọ dị, a pụrụ ịhụ ụfọdụ kpakpando ndị dịdewere ibe ha ma nwee envelopu nke ihe ndị na-eme ka ihe dị ha gburugburu. Ihe omuma a nwere oke a na-achoghi achota ya na ihe ndi ozo di ka ndi ozo ma obu aja. Site na nke a, ndị sayensị chere na a ga-enwerịrị ọtụtụ sel igwe n’eluigwe na ala dika nke anyị.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ọtụtụ nyocha na nyocha jisiri ike chọpụta ụfọdụ mbara ala na-agba gburugburu ụdị Sun. Achọpụtala mbara ala ndị a n'ụzọ na-enweghị isi. Nke ahụ bụ, n’etiti nchọpụta, a chọpụtala ma chọpụta na mbara ala ndị ahụ achọpụtala. Nwepu ego a na-egosi na o nweghi mbara ala nke ndị achọtara nwere ike ịnabata ndụ ọgụgụ isi. A na-akpọ mbara ala ndị a na-adịghị anya na mbara igwe anyị Exoplanets.
Usoro mbara igwe anyị dị na mpụta Milky Way. Uyọkọ kpakpando a nwere ọtụtụ ogwe aka ma anyị nọ n'otu n'ime ha. Ogwe aka ebe anyị nọ ka a na-akpọ Ogwe Aka nke Orion. Etiti Milky Way dị ihe dị ka afọ 30.000 site na ya. Ndị ọkà mmụta sayensị na-enyo enyo na ọ bụ nnukwu oghere ojii mejupụtara etiti ụyọkọ kpakpando ahụ. A na-akpọ ya Sagittarius A.
Mbara ala nke usoro mbara igwe
Ogo nke mbara ala dị iche iche. Naanị Jupita nwere ihe karịrị okpukpu abụọ okwu gbasara mbara ala ndị ọzọ niile. Usoro mbara igwe anyị sitere na mma nke ihe igwe ojii nke nwere ihe kemịkal nile anyị maara site na tebụl oge. Ihe ngosi ahụ siri ike nke na ọ mechara daa na ihe niile gbasaa. A na-etinye atom atom n'ime atom atom site na ngwakọta nuklia. Nke a bụ otu esi guzobe Anyanwụ.
Ugbu a anyị na-ahụ mbara ala asatọ na Anyanwụ. Mercury, Venus, Mars, Earth, Jupiter, Saturn, Uranus na Neptune. E kewara mbara ala ndị dị n’ụdị abụọ: ime ma ọ bụ nke ụwa na mputa ma ọ bụ Jovian. Mercury, Venus, Mars na Earth bụ ụwa. Ha kacha nso Anyanwụ ma sie ike. N'aka nke ọzọ, a na-ahụta ndị fọdụrụ dị ka mbara ala dịkarịsịrị na Sun ma a na-ahụta ha dị ka "Ndị Refeyim Gaseous".
Banyere ọnọdụ nke mbara ala, enwere ike ịsị na ha na-agagharị n'otu ụgbọelu. Agbanyeghị, mbara igwe ndị na - agba okirikiri na-agbagharị n’akụkụ dị larịị. A na-akpọ ụgbọelu ebe mbara ụwa anyị na ụwa ndị ọzọ dị gburugburu bụ eclipti elu. Ọzọkwa, mbara ala niile na-agbagharị n'otu ụzọ gburugburu Sun. Comets dị ka nke Halley, na-agbagharị na ntụgharị ihu.
Anyị nwere ike ịmata ihe ha dị ka ekele maka telescopes oghere, dị ka Hubble:
Hubble mbara igwe
Nkịtị Satellites na dwarf mbara ala
Mbara ala nke mbara igwe nwere Satellites dị ka ụwa anyị. A na-akpọ ha "ọnwa" iji gosipụta onwe ha n'ụzọ ka mma. Mbara ala ndị nwere Satellites bụ: Earthwa, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus na Neptune. Mercury na Venus enweghị satịlaịtị nkịtị.
Enwere ọtụtụ mbara ala ndị pere mpe. Ndi Ceres, Pluto, Eris, Makemake na Haumea. O nwere ike ịbụ oge izizi ị nụrụ ya, ebe ọ bụ na etinyeghị mbara ala ndị a na usoro mmụta nke ụlọ akwụkwọ ahụ. N'ụlọ akwụkwọ ha lekwasịrị anya n'ịmụ usoro mbara igwe kachasị. Nke ahụ bụ, ihe niile ahụ na-anọchite anya ya. Mbara igwe kachasị mkpa chọrọ teknụzụ ọhụụ na igwefoto dijitalụ iji chọpụta.
Mpaghara ndị isi
E kewara usoro mbara igwe na mpaghara dị iche iche ebe mbara ala dị. Anyị na-ahụ mpaghara Anyanwụ, nke Asteroid Belt nke dị n’etiti Mars na Jupita (nke nwere imirikiti asteroids na sistemụ dum). Anyị nwekwara Kuiper Belt na Disk gbasara. Ihe niile gafere Neptune na-ajụ oyi kpamkpam site na obere okpomọkụ ya. Anyị mechara zute igwe ojii oort. Ọ bụ igwe ojii na-enweghị atụ nke kpakpando na kpakpando ndị a hụrụ na nsọtụ usoro mbara igwe.
Site na mbido, ndị na-enyocha mbara igwe ekewaala usoro mbara igwe ụzọ atọ:
Nke mbụ bụ mpaghara dị n’ime ime ebe a na-ahụ mbara ala ndị jupụtara na nkume.
Mgbe ahụ, anyị nwere mpaghara dị n’èzí nke nwere nnukwu gas.
N’ikpeazụ, ihe ndị gafere Neptune na ndị oyi kpọnwụrụ.
Ọtụtụ oge ị nụla banyere njehie eletrik nwere ike ibute site na ikuku anyanwụ. Ọ bụ osimiri nke irighiri ihe nke na-ahapụ Sun na-aga n'ihu ma na oke ọsọ. Ihe mejupụtara ya bu nke electrons na proton ma kpuchie usoro mbara igwe niile. N'ihi ọrụ a, igwe ojii yiri afụ na-ekpuchi ihe niile dị n'ụzọ ya. Akpọwo ya heliosphere. N’akụkụ ebe ọ ruru heliosphere, a na-akpọ ya heliopause, ebe ọ bụ na ikuku ikuku adịghị. Mpaghara a bụ nkeji 100 Astronomical Units. Iji nweta echiche, otu ihe gbasara mbara igwe bụ ụzọ dị anya site n’ụwa ruo n’anyanwụ.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, usoro mbara igwe anyị bụ ebe obibi nke ọtụtụ mbara ala na ihe ndị bụ akụkụ nke eluigwe na ala. Nnyin idi ekpri ikpa-ukot ke ufot akamba desat.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Usoro mbara igwe
Precambrian Eon: ihe niile ị chọrọ ịma